Ukuzikhulula | Thenga i-Blue, Red, Violet, Green Laser Pointer - I-Lasers-Pointers.com
Lezi Zimo Ezijwayelekile Zenkontileka (lapha ngemuva kwezimo ezijwayelekile) zilawula inqubo yokuthenga nokuthengisa imikhiqizo enikezwa ngabakwaLasers-Pointers.com (lapha eLasers-Pointers.com) kukhathalogu etholakala kwiwebhusayithi yayo ethi www.Lasers-Pointers.com.
Izimo Ezijwayelekile zibopha iLasers-Pointers.com kanye nomthengi (ikhasimende), ibanikeza uchungechunge lwamalungelo nezibopho, kusukela esikhathini lapho laba bantu besikhathi esizayo benza futhi bemukela i-oda ngekhasi elishiwo ngenhla. Ziyadingeka futhi ziyafundwa yizo zombili izinhlaka, ngakho-ke ukwamukelwa kwazo lapho zibhalisa njengekhasimende kubalulekile ukuze ukwazi ukwenza i-oda ngokusemthethweni. Ngakho-ke, iKhasimende kufanele lifunde lezi zimo ngokucophelela.
Izihloko zezigaba ezahlukene zifundisa kuphela, futhi ngeke ziphazamise, zifanele noma zandise ukuchazwa kwezimo ezijwayelekile.
Lezi Zimo Ezijwayelekile zizolawulwa yimibandela emithethweni yezomthetho yamanje.
1. Amaqembu ahilelekile
Igama: Luis Corraliza Sanchez
Ihhovisi elibhalisiwe: C / San Juan Bautista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Toledo
I-imeyili (i-imeyili): info@lasers-pointers.com
Ikhasimende lizothathwa njenganoma imuphi umsebenzisi weWebhu www.Lasers-Pointers.com ufaka i-oda nokwamukelwa kwayo ngasikhathi sinye ngesikhathi sokuqedwa kwayo.
IKlayenti kumele libhalise kanjalo futhi linikeze imininingwane elandelayo ukuze ikwazi ukubeka i-oda: igama nesibongo noma igama lenkampani, i-CIF / NIF, ikheli le-invoice, ikheli lokulethwa, inombolo yocingo yokuxhumana kanye ne-imeyili yokuxhumana. Ngalesi sikhathi, kufanele wamukele lezi Zimo Ezijwayelekile.
Le mininingwane enikezwe iKhasimende izophathwa ngokuya ngemigomo yokusetshenziswa kwewebhusayithi (isigaba "Isaziso Sezomthetho")
I-2. Inhloso yesivumelwano
Ukuthengiswa kwemikhiqizo enikezwa yiLasers-Pointers.com kuwebhu yakho yiKhasimende. Lezi yimikhiqizo yezikhombisi ze-laser ezenzelwe ukusetshenziswa kwangasese.
3. Ukunikezwa kwethenda
Ukunikezwa kukhawulelwe emikhiqizweni evela kuWebhu www.Lasers-Pointers.com, futhi kuvumelekile ukuthengwa emhlabeni wonke.
Umkhiqizo ngamunye uneshidi ledatha elibonisa izici zobuchwepheshe zomkhiqizo, uhlobo, imodeli, izithombe, intengo yokuthengisa ne-VAT efakwe ePeninsula naseBalearic Islands, kanye nesikhathi sokutholakala komkhiqizo ngokubuka ukulethwa kwawo kanye nokulethwa kwikhasimende.
Inani lezindleko ze-oda lizokwaziswa ku-Client ngaleso sikhathi sokwenza i-oda lakho nangaphambi kokwamukelwa okufanayo.
Intengo yemikhiqizo iyona evela kwiWebhu ngesikhathi sokufaka i-oda.
I-4. Ukwamukela ukunikezwa
Kuvela ngesikhathi lapho Ikhasimende linikeza ukuvuma okucacile ku-oda ebekwe. Phambilini, ngokufana nokurejista njengekhasimende, iklayenti kumele ngabe lamukele Imibandela Ejwayelekile.
5. Imiyalo yokukhokha
Kunezindlela ezintathu zokukhokha inani elibekiwe le-oda ngalinye, ongakhetha kulo iKlayenti:
A) Ukukhokha kusengaphambili ngokudluliselwa kwebhange:
IKlayenti kumele lidlulisele ebhange kwi-akhawunti yeLasers-Pointers.com ngenani lentengo yemikhiqizo yemiyalo. Ekudluliselweni kumele kukhombise inombolo ye-oda (inamba inikezwa ngokuzenzakalelayo uhlelo lapho i-oda seliphelile); Ngaphezu kokubonisa njengomzuzi ofanayo ku-Lasers-Pointers.com.
Ukudluliselwa kumele kwenziwe kungakapheli isikhathi esiyizinsuku eziyishumi kusukela kuphothulwe i-oda kuya kwi-akhawunti yasebhange okuzovela ngemuva kokuthenga. Uma kungekho bufakazi benkokhelo phakathi kwalesosikhathi, i-oda lizokhanselwa ngokuzenzakalelayo.
B) Ukukhokha ngekhadi:
Ikhasimende lingakhetha ukukhokha ngekhadi lakhe, ngoba libona ukusebenza ngaleso sikhathi kokuthola i-oda. Inkokhelo ngekhadi iqinisekile nge-100%.
6. Ukulethwa Kwemiyalo
Izikhathi zokulethwa kwama-oda zincike ekutholakaleni komkhiqizo noma imikhiqizo eyibumbayo, ukutholakala okukhonjisiwe kumathebhu womkhiqizo ngamunye kukhathalogu leWebhu www.Lasers-Pointers.com. Imibandela yokutholakala, ngenhloso yokuhlanganisa isikhathi sokulethwa kwama-oda, kuzoba yilezo ezibonakala zikhangisiwe ekhasini ngesikhathi i-oda lifakwa umthengi.
Kumiyalo ehlelwe ngokusemthethweni kwimodi yokukhokha kusengaphambili, nakho kuzonakwa ekubalweni kwezikhathi zokukhishwa kwezinsuku zokugcina ubufakazi bokuthi bekutholakele ukukhokhelwa yiKhasimende ngokudluliselwa kwebhange noma imali engenayo ku-akhawunti yenombolo yasebhange ekhonjiswe ngabakwa-Lasers Izikhombisi.com.
Kodwa-ke, le nkathi yokutholakala ingashintshwa esimweni sama-oda afanayo womkhiqizo noma imikhiqizo eholela ekugcineni kwesitoko somkhiqizo. Isikhathi esisha sokulethwa sizokhonjiswa Kwiklayenti ngesikhathi esifushane kunazo zonke. Uma ukuphela kwesitoko kuchazekile, iKhasimende lizokwelulekwa ukuthi likhethe phakathi kokukhetha umkhiqizo ngaphandle kwezimpawu ezifanayo nenani elifanayo nomkhiqizo othengisiwe, noma likhansele i-oda lakho, libuyisele imali ekhokhwe ngaphambi kwesikhathi uma sekudingeka ama-oda ngokuzithoba Ukukhokha kusengaphambili.
Ukulibaziseka ekulethweni kwezinsuku ezingaphezu kweshumi ngokusho kwesikhathi sokutholakala, ukubambezeleka okubangelwa yiLasers-Pointers.com, kuzonika ikhasimende ilungelo lokwesulwa kwe-oda lakhe uma ebonakala ebhala nge-imeyili nge-imeyili info ikheli le-lasers-pointers. com Futhi, lapho kusebenza khona, imali ekhokhelwe ngaphambi kwesikhathi, futhi ngaphandle kwesimangalo somonakalo, yamanje noma yesikhathi esizayo, iqondile noma engaqondile.
Izikhathi zokulethwa kuzoncika kuhlobo lokuthumela olukhethwe ikhasimende, kuzovela phakathi nenqubo yokuthenga. Lawa magama ahlala elinganiselwe futhi ngasosikhathi awanamshwalense, ngakho-ke awusoze abe yisizathu esizwakalayo sokwenqatshwa kwephakeji noma ukwesulwa kokuthenga, iklayenti liyaqonda futhi lithathe ukwamukelwa kwalo kanye nesimangalo sezindleko engizenzile uma kungenjalo uqedelele ukuthenga ngalesi sizathu.
Ama-oda angahanjiswanga iKhasimende kungakapheli izinsuku eziyisikhombisa ukuthi athunyelwe ngezizathu ezingekho kwi-Lasers-Pointers.com azobuyiselwa kumthengisi, i-oda likhanselwe zonke izinhloso, libuyiselwe Klayenti, uma likhona, imali ekhokhwe ku qhubekela phambili, futhi ngaphandle kwesimangalo somonakalo, samanje noma esizayo
Ukulethwa kuzokwenziwa umnyango nomuzi ekhelini lokulethwa okuboniswe kwidatha yokuthumela. Ukuguqulwa okulandelayo kwaleli kheli kungakha uchungechunge lwezindleko ezizothwalwa yiKhasimende.
Ama-oda azokwethulwa yinkampani yezokuthutha ekhelini lokulethwa elikhonjiswe yiKhasimende nomuntu oqokiwe njengowemukeli okufanayo. Lolu lwazi luzofakwa kumbhalo wokulethwa wenkampani yezokuthutha, ozobonisa inani lamaphakheji wokuthumela, isisindo esiphelele, inombolo yoku-oda nembuyiselo (kuphela ezimweni ze-oda ezenziwe ngendlela yokukhokha ngokubuyiselwa kwemali) .
Ukulethwa kwemikhiqizo ebukhali noma eyeqile ngokweqile, noma yemikhiqizo ethula ubunzima bokulethwa, izolethwa ku-portal yekheli elikhonjisiwe.
Ngaphezu kwenothi lokulethwa, i-invoice yokuthenga izohanjiswa kwikhasimende nge-oda ngalinye, nge-imeyili.
Uma i-invoice ilahlekile, iKhasimende lingayicela nge-imeyili kuleli kheli info@lasers-pointers.com, okukhombisa igama lomnikazi we-invoice nenombolo ye-oda, futhi lizothunyelwa kuwe nge-imeyili.
Uma, ngesikhathi sokulethwa, kubonakala ngokucacile nangokucacile, ngaphandle kwesidingo sokuphatha ukuthunyelwa noma ukuthunyelwa komkhiqizo, ukuthi umkhiqizo unezici ezibangelwa ukulimala kokuhanjiswa noma, ngendlela efanayo, Iphutha ku izimpahla ezitholakele, iKhasimende kufanele liyiqophe kumbhalo wokulethwa futhi liwuthumele kwa-Lasers-Pointers.com (nge-imeyili ebhalwe ekhelini info@lasers-pointers.com ngaphakathi kwamahora angama-24 ngemuva kokuthola i-oda ukuze ukwazi ukucela ukubuyiselwa komkhiqizo othintekile bese kuthi esikhundleni sawo kungeniswe okusha noma ukubuyiselwa kwemali yenani elikhokhelwe nguyena.
Amaphutha akhiqizwe ezokuthutha anokwazisa kuphela ngemuva kokuvula umkhiqizo kufanele adluliselwe emahoreni angama-24 okuqala kusukela ekwamukelweni komyalo ngeposi ye-elekthronikhi ebhekiswe ekhelini info@lasers-pointers.com, ekhombisa ukulimala okubangelwe ngumkhiqizo futhi Icela ukubuyiselwa komkhiqizo othintekile futhi ngokubuyiselwa okunye kwenziwe okusha noma ukubuyiselwa kwemali yenani elikhokhelwe nguyena.
I-7. Ukukhanselwa kwama-oda
Ukukhanselwa kwama-oda kuphela okuzokwamukelwa uma i-oda lakho lingakathunyelwa. Uma kungenzeka ibilungiselelwe kodwa ingathunyelwanga uma ufisa ukuyikhansela ungakwenza lokho uthatha izindleko ze-10 € ezizoncishiselwa esilinganisweni esivele sikhokhelwe njengokucutshungulwa kwe-oda. Uma ungakakhokhi i-oda lakho lokukhetha indlela yokukhokha lapho ulethwa, kufanele ukhokhe imali eyi-10 € ngokufaka ebhange kunoma yimaphi ama-akhawunti azonikezwa, uma ungafungi futhi usivuma leso sikweletu neLasers-Pointers. com Okuzothatha izinyathelo zomthetho ezibona kufanelekile ukuthola leli nani. Uma i-oda lakho selivele lithunyelwe ungathumela futhi phakathi nesikhathi esikhulu sezinsuku eziyi-14, kepha izindleko zokuthumela zizothwalwa yikhasimende / umthengi, futhi uzodonswa kwinani elizobuyiselwa ku-15 € ngezindleko zokuthumela ku ingxenye yethu kanye Ukusebenza kwe-oda.
Isibopho somthengi / ikhasimende ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo owuceliwe yiwo owufunayo futhi uma ungabaza ngakho-ke kuyisibopho somthengi / ikhasimende ukuxhumana neLasers-Pointers.com ukubuza ngomkhiqizo ngaphambi komkhiqizo wawo ukuthenga.
Uma kwenzeka ukuthenga, lapho kuthunyelwe, kwenqatshwa ngumamukeli / ikhasimende ngezizathu ezingezona ezeLasers-Pointers.com, angahle afune izindleko zokuthumela kumamukeli okufanayo, ukuphoqa owokugcina ukuthi akhokhe izindleko zokuthumela ezitholwe ezizoba yiliphi intando kulinganiselwa ku-20 €.
I-8. Isiqinisekiso Somkhiqizo
Uhlaka lwezomthetho lwesiqinisekiso (Umthetho 23/2003, kaJulayi 10, ngeziqiniseko Zokuthengiswa Kwezimpahla Zabathengi) luhlose ukuhlinzeka iKlayenti ngezinketho ezahlukahlukene zokufuna ukuthuthwa kwendle lapho into etholakele ingahambisani nenkontileka, imnikeze inketho yokufuna ukulungiswa noma ukushintshwa okuhle, ngaphandle kokuthi akunakwenzeka noma akuhlukani. Lapho ukulungiswa noma ukushintshwa kungenzeki noma kungaphumeleli, umthengi angafuna ukwehliswa kwentengo noma ukunqanyulwa kwenkontileka. Imikhiqizo inewaranti yeminyaka engu-2 kusukela ngosuku lokutholwa kokuthunyelwa. Abakhiqizi bemikhiqizo babhekene nesibopho sesiqinisekiso futhi bahlinzeka ngosizo oludingekayo lobuchwepheshe nangemva kokuthengisa. Uma kwenzeka ikhasimende linanoma iluphi uhlobo lwenkinga ngomkhiqizo, sicela uxhumane neTechnical Aidance Service (SAT) enqunywe ngumenzi ngamunye.
Ngokwalesi sikhathi, iLasers-Pointers.com izophendula kwiKhasimende nganoma yikuphi ukuntuleka kokuvumelana okukhona ngesikhathi sokulethwa kwemikhiqizo ye-oda, okuqondwe njengezimpahla zokusetshenziswa kwangasese.
Isiqinisekiso seLasers-Pointers.com siyizinyanga eziyi-6 njengomhambisi, ngemuva kwezinyanga eziyi-6 kusukela ngosuku loku-oda isiqinisekiso sinikezwa ngumkhiqizi ngqo. I-Lasers-Pointers.com uma kungenzeka yehluleke omunye wale mikhiqizo izonikeza umthengi ikheli lomenzi ukuthumela okufanayo ukuze kulungiswe noma kufakwe okunye esikhundleni salokho. Izindleko zalokhu kubuya zizothwalwa ngumthengi nganoma yisiphi isikhathi.
· Uma isici siqala ukuvela phakathi nezinyanga eziyi-6 zokuqala kusuka ekulethweni kokuhle, kucatshangwa ukuthi i-anomaly isivele ikhona ngenkathi eyithenga futhi umthengi akufanele afakazele lutho.
· Kodwa-ke, lapho ukuntuleka kokuvumelana kuzibonakalisa khona ngemuva kwezinyanga eziyi-6 futhi ezimweni ezingabazayo, umenzi angadinga umbiko wesazi ozimele ukucubungula isiqinisekiso. Ezimweni ezisobala zokungasebenzi kahle noma ukusebenza okungajwayelekile ngaphansi kwesikhathi sesiqinisekiso akunankinga.
Kunoma ikuphi, ngesikhathi lapho umthengi encishwa umkhiqizo umiswa ukubalwa kwesikhathi sesiqinisekiso; Isibonelo, uma ukulungiswa kwento kuthatha izinsuku eziyi-15, isikhathi sewaranti sizophela ngemuva kwezinsuku eziyi-15 kunokuba kuhlelwe ekuqaleni.
Ukuze ubhekane nalesi siqinisekiso, iKhasimende kufanele lixhumane neLasers-Pointers.com ngokuthumela i-imeyili ekhelini info@lasers-pointers.com elizokhombisa kulo: igama lomnikazi we-invoice, inombolo ye-oda, inombolo ye-invoice kanye nembangela yokungahambisani.
Uma udinga ukuthumela umkhiqizo wakho ukuthi ubuyekezwe, kuzonikezwa ikheli lokuthumela. Izindleko zokuthumela zizothwalwa yikhasimende. Eduze kwento eyonakele kufanele kufaka phakathi ikhophi ye-invoice yokuthenga nesivumelwano sewaranti esisayinwe kahle yi-technical Support. Ngemuva kwezinsuku eziyi-7 kusuka isimangalo sekhasimende eLasers-Pointers.com, uma umkhiqizo ungakacutshungulwa futhi wethulwa endaweni ekhonjiswe yiTechnical Support, umnyango wethu ngeke usamukele isimangalo futhi uzokhansela ukusho kwesicelo ngokukhansela noma yiluphi uhlobo lweWaranti kwinto yokusebenza. Uma ingxenye eyonakalisiwe itholwa ngenxa yokupakishwa okungahambi kahle, ngeke sinakekele ukulungiswa. Ukwazisa ikhasimende le nkinga nokuyixazulula ngokuqondile yikhasimende ne-ejensi yezokuThutha. Noma yikuphi okokusebenza okungahambelani nalezi zimpawu kuzothunyelwa kuwe, noma ngabe lokho kuhambelana nezinye izingxenye zewaranti. Uma ukhetha indlela yokuphepha engavikelekile futhi iphakethe lilimele, ikhasimende lizobhekana nokulahleka.
- Inqubo yesiqinisekiso.
A) Uma ukutholwa komkhiqizo kufakazela ukuthi lo monakalo umbozwe yizimo zewaranti, uma usulungisiwe noma ubuyiselwe endaweni ethile uzobuyiselwa kwikhasimende ngaphandle kwezindleko.
· Lungisa noma ungene esikhundleni. Into yokuqala okufanele yenziwe ukuthumela umkhiqizo ukuyilungisa noma ukubuyisela okunye esikhundleni sayo okusha. Okukhethayo kusele kumthengisi, ozonquma ngesisekelo sezindleko ezikhiqizwe inketho ngayinye: uma enye yazo ingafani nenye, umthengisi angakhetha okulula kakhulu kwizintshisekelo zabo, inqobo nje uma umthengi engacabangi Okubi kakhulu. Esimweni lapho i-athikili efanayo ingekho, kwenziwe ushintsho embhalweni wezinzuzo olinganayo noma olukhulu, luzokwazisa njalo nokwamukelwa kwangaphambi kwalokho, futhi inqobo nje uma isicelo sekhasimende asisihlukanisi, njengoba kukhonjisiwe eMthethweni 23/2003 ka-Julayi 10 weziQinisekiso Ekuthengisweni Kwezimpahla Zabathengi (I-BOE no. 165 ka-11-07-2003)
Ukuncishiswa kwentengo noma ukunqanyulwa kwenkontileka. Lapho kungenzeki (noma kunengqondo) ukufaka umkhiqizo esikhundleni esisha, lapho ukulungiswa noma ukufakwa esikhundleni kungasebenzi ukushiya umkhiqizo ungaphansi kwezimo zokuvumelana, lapho isikhathi sesikhukhumale ... umthengi anganquma phakathi kokubuza ukuncishiswa kwentengo Noma kunqanyule inkontileka (inqobo nje uma ukungabikho kokuvumelana kubalulekile). Ngaphezu kwalokho, umthengi unelungelo lokuthola isinxephezelo ngomonakalo.
I-Lasers-Pointers.com ngenxa yezizathu ezingezona ezingezenkampani, ayizibophezele ekulethweni komkhiqizo obizwe ngesikhathi esithile, ngokuba yisikhathi esishiwo ngumthengisi noma umenzi, igama elizokwaziswa ngokufanele kumakhasimende ngeposi .
Ukuhanjiswa okubuyayo kuzokwenziwa ngeposi ejwayelekile, okwenza ukuthi umthengi abhekane nanoma ikuphi ukulahleka, ukulimala noma ukulahleka, uma ukhetha ukuthunyelwa okuhanjelwe umshuwalense futhi ngokushesha kungakhetha ukubuyiselwa nge-courier ekhombisa ukuthi ngubani, okufanele akhokhe u-3 €. Le mali izokhokhwa ngokudluliselwa kwebhange.
B) Uma ukutholwa komkhiqizo kufakazela ukuthi imishini isebenza kahle, izobuyiselwa kumakhasimende futhi ikhasimende kufanele likhokhe izindleko zokuhamba ezikhiqizwayo kanye nezindleko zokuphatha nokubheka, kulinganiselwa ngenani eliphelele le-10 €. Ukuthumela okubuyayo kuzokwenziwa ngeposi ejwayelekile, umthengi obhekele noma ikuphi ukulahleka, ukulimala noma ukulahleka, uma ukhetha ukuthunyelwa okuhanjiswa ngomshuwalense futhi ngokushesha kungakhetha ukubuyiselwa nge-courier ekhombisa, kukhulisa inani le-3 € plus, 13 € inani. Le mali izokhokhwa ngokudluliselwa kwebhange.
C) Uma, ngemuva kokuthola umkhiqizo, ukwehluleka kwemishini kutholakala kuphula imibandela yewaranti, iwaranti izoshunyayelwa. Into izobuyiselwa kwikhasimende futhi kufanele ikhokhwe izindleko zokuhamba ezikhiqizwa kanye nokuphatha kanye nokuhlola izindleko, kulinganiselwa ngenani eliphelele le-10 €. Ukuthumela okubuyayo kuzokwenziwa ngeposi ejwayelekile, umthengi obhekele noma ikuphi ukulahleka, ukulimala noma ukulahleka, uma ukhetha ukuthunyelwa okuhanjiswa ngomshuwalense futhi ngokushesha kungakhetha ukubuyiselwa nge-courier ekhombisa, kukhulisa inani le-3 € plus, 13 € in inani. Le mali izokhokhwa ngokudluliselwa kwebhange.
Lapho ukuhanjiswa kwensiza kusebenza kubuyekeziwe, izindleko ezilinganisiwe ezingama-5 € ezihambelana nanoma yiluphi ushintsho lwamakheli noma ukucasulwa, kungaba ngesicelo sekhasimende noma ngoba kuboniswe ngokungalungile kumyalelo, kuzothunyelwa yikhasimende.
Uma iphakethe libuyiselwa ikheli elingalungile, lingabikhona, lingaziqoqi noma lenqaba, ikhasimende lizokwaziswa uma silithola ehhovisi lethu ukuze likhethe ukwenza ngalo. Uma ucela ukuthunyelwa okusha kufanele ukhokhe ama-5 € njengezindleko zokuthumela. Kuzothatha inyanga ukusuka kwisaziso sangakithi ukuvuma isisombululo, ngemuva kwalesi sikhathi ngaphandle kwempendulo kuzobhekwa njengokunganaki ukuthengwa nokudiliza izindatshana zakho kanye nenani elikhokhelwe yizo.
- Ukukhanselwa kwewaranti.
Awekho amacala esiqinisekiso azokwamukelwa lapho imikhiqizo isetshenziswe ngendlela engafanele noma cha ngokwezimpawu zawo yiKhasimende.
Imikhiqizo ingaphandle kwewaranti ngenxa yezizathu ezilandelayo:
· Ukusetshenziswa okungalungile, ukukhwabanisa noma ukugcinwa yiKhasimende ledivayisi noma into.
· Izakhi ezishiswa ama-surges kagesi noma ama-overvoltages.
· Izakhi ezaphukile noma ezilimele ziba nomthelela.
· Ukulungiswa okungalungile, ukuguqulwa yikhasimende leqembu.
· Ukwehla, ukuqedwa noma ukufihlwa yikhasimende leLasers-Pointers.com kuqinisekisa ilebula noma umenzi wayo yonke imikhiqizo (kufaka amalebula anezinombolo ezilandelanayo kanye nezimpawu zokuphepha).
· Amaphutha enzeka ngenxa yokusetshenziswa okungafanele noma ngaphandle kwezimo ezichaziwe zezemvelo, amaphutha ekufakweni, noma ukugqokwa nokukhishwa ngenxa yokusetshenziswa okujwayelekile kwemishini.
· Ukulimala okubangelwa izinhlekelele ezifana nemililo, izikhukhula, umoya, ukuzamazama komhlaba noma iziphepho.
· Umonakalo obabazekayo noma osakazwe ezintweni zokwenziwa ngopulasitiki ezifana nokushayeka.
· Ukulimala okubangelwa yimithelela nezinye izinto, ukuwa, ukuchithwa kwamanzi noma ukucwiliswa kweziphuzo.
· Okubi njengomphumela wokukhwabanisa ochwepheshe abangagunyaziwe, kanye nokuguqulwa okulandelayo noma izandiso ezingafakwanga ekucushweni kwasekuqaleni.
· Iziphambeko ezihlobene namaphutha wokumisa noma ukungahambisani nendawo.
· Izingxenye ezisetshenziswayo, njengebhethri. Ukwehliswa kwempilo yebhethri ngenxa yezinqubo zokushaja / zokususa okuphindaphindiwe kuthathwa njengokujwayelekile.
· Ukulimala ngengozi, ukuhlukumeza, ukusetshenziswa kabi noma izicelo ezingafanele.
· Noma yikuphi ukulimala noma ukulimala uma inombolo ye-serial nelekhodi yebhakhodi yomkhiqizo noma enye yezakhi zayo iguquliwe, isusiwe noma isusiwe.
I-9. Ilungelo lokuhoxiswa
IKlayenti linelungelo lokuhoxisa lo myalo kungakapheli izinsuku eziyi-14 zebhizinisi ngemuva kokuthola i-oda, njengoba kubekiwe ku-Article 44 of Law 7/1996, langoJanuwari 15, eRetailing.
Ikhasimende kufanele lazise iLasers-Pointers.com nge-imeyili (info@lasers-pointers.com) kungakapheli izinsuku eziyi-14. Ngale ndlela uMthengi angaziswa ngenqubo yokubuyisa i-oda (inombolo yokubuya, indlela yokuthumela nekheli lokulethwa).
Yonke impahla kufanele ibuyiselwe ekuhlanganisweni kwayo kwangempela, isesimweni esihle futhi ngaphandle kokuthumela. Ikhasimende kufanele livumelane nezimo futhi lithathe izindlela ezifanele zokuvikela nokupakisha umkhiqizo ezizothunyelwa ezindlini zethu zokugcina. Ngaphandle kwalokho iLasers-Pointers.com inelungelo lokunqaba ukubuya.
Ngaphandle kwalesi sikhathi, akukho okucekelwa uku-oda okuzokwamukelwa, noma ama-oda wokuhlinzekwa kwezimpahla ezenziwe ngokuya ngezincazelo zeKhasimende noma ezenzelwe umuntu uqobo, noma ukuthi, ngemvelo yazo, angeke zibuyiswe noma zingalimaza noma ziphelelwe yisikhathi ngokushesha; Nezicelo zokuhlinzekwa kokuqoshwa komsindo noma ama-video, ama-discs ne-software angavulwa yi-Client, kanye namafayela we-computer, anikezwa nge-elekthronikhi, angakwazi ukulandwa noma ukukhiqizwa kabusha ngokushesha ukusetshenziswa. Uma iphakethe libuyiselwa ngokungalungile noma ngokungafanele, ikhasimende lizokwaziswa uma silithola ehhovisi lethu ukuze likwazi ukukhetha ukuthi lifuna ukwenzani ngalo. Uzoba nenyanga eyodwa kusukela esaziswe yithi ukusivuma isinqumo, ngemuva kwalesi sikhathi ngaphandle kokuphendula kuzothathwa ukuthi uyakulahla ukuthenga futhi alahle imibhalo yakhe nemali ayikhokhele yona.
Ikhasimende elizothwala izindleko eziqondile zokubuyisa umkhiqizo ku-Lasers-Pointers.com. Uma kwenzeka ukuthi ukubuya kube ngephutha lokuthumela noma ezinye izimbangela ezingaphatheki kithi siyonakekela izindleko zokuthumela. Asemukeli noma yikuphi ukubuyela ezimotweni okufanele. Ikhasimende lizobhekana nanoma yimuphi umonakalo odalwe ngesikhathi sokuhamba kwembuyiselo umkhiqizo. Izimbuyiselo kufanele zilethwe lapho ziya khona kungakapheli izinsuku eziyi-14 ngemuva kosuku lokwamukelwa kwembuyiselo. Ngaphandle kwalokho iyonqatshwa futhi ibuyiselwe.
Lapho iKhasimende selisebenzise ilungelo lokuhoxa noma ilungelo lokuhoxa, lapho sezithole izimpahla futhi laqinisekisa ukuthi lisesimweni esifanele abakwaLersers-Pointers.com bazophoqeleka ukuthi babuyise isamba esikhokhelwa nguMthengi ngaphansi kwezindleko zokuthumela, ukukhokha amakhomishini, Izindleko zokubuyisa ezifana nezindleko zasebhange nezindleko zokucubungula ezilinganiselwa ku-10 €. Ukubuyiselwa kwalezi zibalo kuzokwenziwa ngokushesha okukhulu futhi, noma kunjalo, kungakapheli isikhathi esiyizinsuku ezingama-XNUMX kusukela kuhoxa noma ekuxazululeni.
10. Izibopho zeklayenti
Funda Izimo Ezijwayelekile yamanje ngaphambi kokubhaliswa njengekhasimende.
Hlonipha Izimo Ezijwayelekile uma umyalo wamukelwa.
Khokha amanani avunyelwe ngesikhathi sokubeka umyalelo.
11. Izibopho zeLasers-Pointers.com
Hambisa umkhiqizo usesimweni esihle endaweni ethunyelwe kuyo.
Hlonipha intengo yama-oda okuvunyelenwe ngawo ngesikhathi sokuqeda okufanayo.
12. Amalungelo Amakhasimende
Thola imikhiqizo eyenza i-oda lakho esimweni esiphelele.
13. Amalungelo weLasers-Pointers.com
Thola ukukhokha kwama-oda.
Shintsha amanani asungulwe kuwebhu yakho ngemikhiqizo yakho.
Shintsha izikhathi zokulethwa komkhiqizo ngokuya ngokutholakala okufanayo.
Khansela ama-oda wokungakhokhi yiKhasimende.
Khansela iWeb ngaphandle kwesaziso esandulele.
Ngezinhloso zezaziso, izicelo nemibhalo yanoma iluphi uhlobo lenkontileka leli elikhuphukayo, abakwaLasers-Pointers.com bazothathwa njengekheli eliboniswe kulezi Zimo Ezijwayelekile.
Noma umushwana walesi sivumelwano noma enye yezingxenye zawo ungasebenzi noma ungasebenzi, amanye amabinzana noma izingxenye zawo zizoqhubeka zisemthethweni futhi zibalulekile.
I-16. Imithethonqubo efanelekayo
Lezi Zimo Ezijwayelekile zilawulwa yimithetho yamanje yaseSpain, futhi ikakhulukazi yi: Civil Code, Umthetho 26/84 kaJuni 19 Jikelele Zokuvikela Abathengi kanye nabasebenzisi, Umthetho 7/98 ka-Ephreli 13, Imibandela Ejwayelekile Yokuqashwa kabusha, Umthetho 7 / I-96 yangomhlaka 15 kuJanawari ku-Ordinance of Retail Trade, Directive 2000/31 EC yePhalamende laseYurophu kanye noMkhandlu wangomhla ziyi-8 kuNhlangulana, Umthetho 34/2002 we-11 kuJulayi ku-Information Society Services kanye ne-Ejensi Yezentengiselwano, Umthetho 23/2003 kaJulayi 10 , Iziqinisekiso Zokuthengiswa Kwezimpahla Zabathengi kanye nemigomo ebathuthukisayo.
Lokhu okulandelayo yimibandela yokusetshenziswa kweWebhusayithi yeWebhusayithi ethi www.Lasers-Pointers.com:
Kusetshenziswa le webhusayithi kanye / noma ukubhalisa njengomsebenzisi kukhombisa ukwamukelwa kwale Migomo yokusetshenziswa kanye Nezimo Ezijwayelekile Zenkontileka.
2. Ubunikazi bale webhusayithi
Le webhusayithi iphethwe yiLasers-Pointers.com Wonke amalungelo okuqukethwe, izithombe, umbhalo, ukwakheka kanye nesoftware iyimpahla yeLasers-Pointers.com.
Zonke izinto zalewebhusayithi, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo, ukwakheka kwayo nokuqukethwe kuvikelwe yimithetho ye-Intellectual Property, Property Industrial kanye nezivumelwano zamazwe aphathelene ne-copyright.
I-3. Ukusetshenziswa kokuqukethwe
Ngaphandle kokuthi kugunyazwe ngokusobala yiLasers-Pointers.com, awukwazi ukukhiqiza kabusha, ukuhambisa noma ukuxhaphaza ngenye indlela okuqukethwe kule webhusayithi nganoma iyiphi indlela.
I-4. Imithwalo yemfanelo
Yize iLasers-Pointers.com yenza yonke imizamo ukuqinisekisa ukunemba nokunemba kokuqukethwe kwale webhusayithi, ingaqukatha amaphutha noma ukungalungi. Ngenxa yalokho asiqinisekisi ukunemba, ukuthembeka noma ukunemba kokuqukethwe kwayo.
AbakwaLasers-Pointers.com bachitha isikweletu solwazi oluqukethwe kumawebhusayithi wesithathu axhumene nezixhumanisi, nesayithi le-Lasers-Pointers.com.
Akukaze kube ngaphansi kwezimo lapho i-Lasers-Pointers.com ibanjelwe kunoma yimuphi umonakalo noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo oluphuma ngaphandle, noma mayelana, nokusetshenziswa kwale webhusayithi.
Kufanele ugcizelele iLasers-Pointers.com ngokumelene nanoma yikuphi ukulimala okubangelwa ukwehluleka kwakho ukuhambisana nalezi zimo noma ukusetshenziswa kokuqukethwe kwale webhusayithi ngaphandle kwemvume yangaphambilini.
Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwezimo ezikhona kusebenza kungenzeki noma kuba kungasebenzi noma kungasebenzi ngaphansi komthetho osebenzayo, lokho kuhlinzeka ngeke kube nomphumela, kepha kuphela kulokho kuncipha kokusebenza, futhi ngeke kuthinte noma yikuphi okunye ukuhlinzekelwa kwezimo Zamanje.
I-6. Umthetho kanye namandla okusebenza
Lezi Zimo Ezijwayelekile kufanele zihunyushwe futhi zilawulwa yimithetho yamanje yaseSpain. Noma iyiphi ingxabano evela kulezi zimo kufanele ixazululwe ezinkantolo zaseToledo, eSpain. Kodwa-ke, lokhu ngeke kuvimbele iLasers-Pointers.com ekusebenziseni ilungelo lokuxazulula noma yikuphi ukukhokhiswa kwelinye igunya elinekhono.
ILasers-Pointers.com inelungelo lokushintsha okuqukethwe yile webhusayithi nganoma isiphi isikhathi nangaphandle kwesaziso esandulele.
I-8. Ubumfihlo buqinisekisiwe ngokugcwele
Umthetho we-Organic 15/1999, kaDisemba 13, Ukuvikelwa Kwedatha Yakho. Idatha yomuntu siqu eqoqwe izokhonjelwa ekusetshenzisweni okuzenzakalelayo futhi ifakwe kumafayili wedatha kaLuis Corraliza Sánchez, obhekele ukugcinwa nokusetshenziswa kwayo.
Iklayenti liqinisekisa ukuthi Idatha yomuntu siqu enikezwe iLasers-Pointers.com ilungile futhi inesibopho sokudlulisela noma iziphi izinguquko kuzo. Umnikazi wedatha angasebenzisa amalungelo okufinyelela, ukulungisa kabusha futhi, njengoba kungenzeka, akhansele ngokuthumela i-imeyili ku-: info@lasers-pointers.com